churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Hutungamiri
Hutungamiri hunowonekwa sechimwe chezvinhu zvakakosha mukereke pasi rose. Nhasi uno makereke arikuwanikwa achiita zvirongwa zvekudzidzisa vatungamiriri vechidiki vatsva uye kutsvaga vatungamiriri vane simba kuti vakwiridzire sangano ravo kuenda pachidanho chepamusoro-soro. Vanhu vanofarira kubatana vachitevera varume nevakadzi vanovakurudzira, vanovamutsiridza uye vanovapa simba rekumira kuita zvinhu zvavanoshuvira. Vanhu vanoda kuona kubata kwaMwari kupfurikidza budiriro yevamwe.
Sezvinei hutugamiri huri mumakereke mazhinji hauchafambirani nezvinotaurwa neBhaibheri.
Hutungamiri huri mumakereke mazhinji hune munhu mumwechete ari pamusoro achiteverwa nevashumiri varipo kumubatsira. Vashumiri ava vanovaka bato rakasimba riri pedyo-pedyo nevatungamiri zvoita kuti vamwe vanhu vemukereke vaite sevanosarudzwa. Vanhu vane zvavakakoshera chete ndivo vanokwanisa kuita nguva nemutungamiri wekereke kwete vanhuwo zvavo. Hukama hwemunhu mukereke hunobviswawo kubva pakukwanisa kuwadzana naMwari amene. Asi vanotoita kuti munhu akazvimiririra ataure naMwari kana kunzwa kubva Kwaari kupfurikidza nemutungamiri kana kuti nehushumiri hwake.
Kunyangwe zvakadaro Mwari haana kubvira aronga kuti kereke ishande saizvozvo. Mwari anotiyambira pamusoro pechimiro chakadai chehutungamiri nenyaya yamambo Sauro. Asi tisati taita tsvagiridzo pamusoro paSauro, ngatimbotsvagei kuti mutungamiri wechokwadi ndiani.
Johane 14:26 Asi Munyaradzi, Mweya Mutsvene, uchatumwa naBaba muzita rangu, iye uchakudzidzisai zvose, nokukuyevudzirai zvose, zvandakareva kwamuri.
Johane 16:13 Asi kana asvika, iye Mweya wazvokwadi, uchakutungamirirai muzvokwadi yose; asi zvaakanzwa, ndizvo zvaachataura, uye uchakuparidzirai zvinouya.
Vaefeso 5:23 Nokuti murume musoro womukadzi, saKristuvo musoro wekereke; iye amene ndiye muponesi wemuviri.
Bhaibheri rinotaura pachena kuti, Jesu ndiye musoro wekereke uye achatungamirira kereke yake kupfurikidza Mweya Mutsvene. Jesu ndiye ega nhume, murevereri pakati pemunhu naMwari, hakuna mumwe munhu, mufundisi, muranda kana mutariri kana umwe mutungamiriwo zvake angakwanisa kumira pakati pako naMwari.
1 Timotio 2:5 Nekuti kunongori naMwari umwechete nemureveri mumwechetewo pakati paMwari navanhu, ndiye munhu Kristu.
Mubhuku raZvakazarurwa, Kristu ari Kristu pachake ndiye ega anowanikwa amire pakati pekereke.
Zvakazarurwa 1:13 Napakati pezvigadziko zvemwenje, umwe akafanana noMwanakomana womunhu akafukanguvo yakasvikira kutsoka, akazvisunga pachivuno nebhanhire rendarama.
Zvakazarurwa 1:20 Zvakavanzika zvenyeredzi nomwe dzawavona muruvoko rworudyi rwangu, nezvigadziko zvinomwe zvemwenje zvendarama. Nyeredzi nomwe ndivo vatumwa vekereke nomwe; nezigadziko zvemwenje zvinomwe ndidzo kereke nomwe.
Dambudziko rinotangira panosarudza vanhu mutungamiri wavanoda kuti agovatungamirira pamweya pachinzvimbo chekusiyira Mwari sarudzo iyi. Vadzidzi vasati vawana hutungamiri hweMweya Mutsvene vakakanganisa chinhu chimwechete. Judas akazviuraya mumwe munhu achibva ada kutsiva nzvimbo yake sekutaura kunoita Shoko. Petro akataura nechaunga vakaita sarudzo isina kunaka.
Mabasa avaApostora 1:21 Zvino pakati pavarume vaiungana nesu nguva yose, Ishe Jesu yaakapinda nekubuda nayo pakati pedu,
22 Kutanga pakubhabhatidza kwaJohane, kusvikira zuva raakabva kwatiri, achikwidza mumwe wavo unofanira kuva chapupu chokumuka kwake pamwechete nesu.
23 Zvino vakaisa po vaviri, vaiti: Josefa wakatumidzwawo Justo naMatia.
24 Vakanyengetera vachiti: Imi Ishe, munoziva moyo yavanhu vose, ratidzai kuti wamakasanangura pana ivava vaviri ndoupi;
25 kuti apiwe nzvimbo pabasa iri nevupostora uhwu, hwaakarasikirwa nahwo iye Judas, kuti iye aende kunzvimbo yake.
26 Zvino vakavakandira mijenya, mujenya ukabata Matia; iye ukaverengwa pamwechete navapostora vane gumi nomumwe.
Zvinosekesa panyaya iyi ndezvekuti Matia haana kuzotaurwa nezvake zvakare muBhaibheri. Asi pava pamberi Pauro ndiye akazova muapostora chaiye akasarudzwa kuzotsiva Judas. Haana kusarudzwa nemunhu asi naMwari.
Vagaratia 1:1 Pauro muapostora, asina kubva kuvanhu, kana kutumwa nomunhu asi naJesu Kristu, naMwari Baba, wakamumutsa kuvakafa.
Kana Mwari vakapa munhu basa kana hushumiri, hazvina basa kuti vamwe vanhu vanobvumirana nazvo here kana kuti kwete. Hazvina basa kuti vanhu vamugamuchira here kana kwete, munhu iyeye anoramba ari akadanwa kuhushumiri ihwohwo kusvikira Mwari vazoshandura zvinhu. SemaKristu tinokwanisa kuona pane chipo chinenge chabva kuna Mwari. Asi hatikwanisi kudzidzisa munhu kuti ave nechipo, hatikwanisi zvakare kuita sarudzo dzekuti ndiani watingape hushumiri kunyangwe tiine watinotarisira.
Iyezvino ngatidzokerei kuna mambo Sauro tione kuti sei Mwari akaisa hutungamiri hwenhema uye zvinofanana papi nekereke yatiri nhasi.
1 Samueri 8:1 Zvino Samueri akati akwegura akagadza vanakomana vake kuti vave vatongi pakati paIsiraeri.
2 Zita romwanakomana wake wedangwe rakanga riri Jowero, nezita rowechipiri Abhija; ivo vaive vatongi paBheerishebha.
3 Asi vanakomana vake havana kufamba nenzira dzake, asi vakatsaukira kupfuma yakaipa, vakagamuchira fufuro, nokusarurama pakutonga.
4 Zvino vakuru vaIsiraeri vose vakaungana, vakauya kuna Samueri paRama,
5 vakati kwaari, tarirai, imwi makwegura, asi vanakomana venyu havafambi nenzira dzenyu, zvino tigadzirirei mambo angatitonga, sezvinoitwa kundudzi dzose.
6 Asi shoko iro harina kufadza Samueri, iro rokuti, tipei mambo ungatitonga. Samueri akanyengetera kuna JEHOVA.
Pamavambo zvaiita sekuti vakuru vaIsiraeri vaive nechikonzero chakanaka chekuchema naSamueri. Kubva pamaonero emunhu wenyama chiitiko ichi chaiita sechakanaka. Samueri aive akwegura vana vake vaive vakaipa. Ndiani waizotungamirira Israeri? Tarirai kunyangwe Samueri, kunyangwe aive muporofita waMwari pachokwadi, akakanganisawo paakaisa vana vake pachinzvimbo chekutonga chaisava chavo. Asi tinofanirwa kudzidza kuisa tariro yedu muna Mwari. Anoziva zvatinoda uye anotipa zvatinoda pakafanira.
Mapisarema 118:8 Zviri nani kutizira kuna JEHOVA pakuvimba nomunhu.
Mwari anotirera nekutitarira uye ane moyo murefu nesu asi kana tikasatarira kwaari pahutungamiriri toisa kuda kwedu pamberi pekuda kwake; anotisiirira kunoita sarudzo dzedu dzakaipa tozotarisana nemibairo yazvo. Tinokwanisa kuwana zvatinoda, asi topesana nechinangwa uye nehurongwa hwaMwari pamusoro pehupenyu hwedu.
1 Samueri 8:7 Ipapo Jehova akati kuna Samueri, terera hako zvose zvinotaura vanhu kwauri, nekuti havana kukuramba iwe, asi vakandiramba ini, kuti ndirege kuva mambo wavo.
Mwari akapa Israeri zvido zvemoyo yavo akavapa munhu kuti ave mambo. Apa tave kuona kuti chimiro chehutungamiri hwemunhu chakaita sei. Mumavhesi anotevera maitiro ese ehutungamiri hwevanhu achataurwa. Tinofanira kuacherechedza tomaziva kuiitira kuti kana tave kuongorora hutugamiri huri pamusoro pedu tigoziva.
1 Samueri 8: 11 Akati, tsika dzamambo, uchakubatai, ndidzo, uchatora navanakomana venyu akavaisa pangoro dzake, vachamhanya pamberi pengoro dzake. (Vanhu vachavimba mune zvichataurwa nezvichavambwa nevanhu vari munharaunda dzavo vakasarudzwa kuti vave vatungamiriri nemutungamiri mukuru. Asi kunyangwe Davidi haana kubvira apupurira zvakadaro. Mapisarema 20 :7 Vamwe vanovimba nengoro, vamwe namabhiza; Asi isu tichareva zita raJEHOVA MWARI wedu.)
12 Uchazvitsaurira vamwe vave vakuru vezviuru, navakuru vamakumi mashanu; ucharaira vamwe kumurimira minda yake, nokukohwa michero yake, nokumuitira nhumbi dzake dzokurwa nadzo, nenhumbi dzengoro dzake. (Mutsetse wevashumiri, vatevedzeri vevafudzi, madhikoni, vatungamiriri vevechidiki unovakwa kuitira kuti sangano rive rakarongeka.)
13 Uchatora vanasikana venyu, vave vavhenganisi vezvinonhuwira, navabiki vezvokudya navabiki vechingwa. (Kuchave navakadzi vazhinji vachaita chikamu chevanofambisa basa muzviitiko zvemumakereke uye pachange paine chikafu chizhinji nguva dzese.)
14 Uchatora minda yenyu neminda yenyu yemidzambiringa, neminda yenyu yemiorivhi yakaisvonaka kukunda mimwe, achipa varanda vake. (Zvinhu izvi zose zvinobva kuvanhu zichashandiswa kukurisa kereke.)
15 Uchatora zvegumi zvembeu dzenyu nezvamazambiringa enyu, achipa varanda vake navabatiri vake. (Zvegumi zvaifanira kuva zviri zvaMwari, zvave kuzoshandiswa kukudza zita rechechi.)
16 Uchatora varanda venyu navarandakadzi venyu, namajaya enyu akaisvonaka kukunda vamwe vose, nembongoro dzenyu, achibatisa mabasa ake nazvo.
17 Uchatora zvegumi zvamapoka enyu amakwai ; nemi muchava varanda vake.
Hongu, hutungamiri hwevanhu hukamisikidzwa zvakanaka hunokwanisa kushanda pakuronga nekudzoreredza vanhu vakawanda. Asi zvinongobatsira chete kuita kuti magungano uye zviitiko zvemukereke zvive zvakarongeka. Uye mashoko anenge achibva kumutunganiri mukuru anosvika kuvanhu mune zvakanakisa. Asizve mashoko aya anege azere netuhunhongwa uye nemharidzo yenhema. Pane vashumiri vazhinji vanenge vari pakati pemunhu naMwari.
Kereke yaMwari yechokwadi munhoroondo haina kubvira yakaita sangano guru. Asi kwaive nemasangano madiki akawanda . Simba raMwari rinoratidzwa nguva dzese nevashoma vachikurira vazhinji. Gidioni akashandisa vanhu 300 chete. Samusoni aive mumwechete airwa nevazhinji. Adino muEzinaiti akauraya vanhu 800 nesimba raMwari. Pachokwadi pavazhinji, kashoma, ndokunge patowanikwa, chiratidzo chekuti Mwari anavo. Bhaibheri rinotiyambira pachinhu ichi.
Mateo 7:13 Pindai nesuwo rakamanikana nekuti suwo rakafara nzira yakapamhamhainoenda kukuparadzwa. Vanopinda naro vazhinji.
14 Nokuti suwo rakamanikana nenzira nhete inoenda kuvupenyu, vanoiwana vashoma.
Mwari ari pakati payo kereke yechokwadi kunyangwe iri duku. Anoda rukudzo rwainounza kuzita rake runova rukuru.
Mateo 18:20 Nokuti apo pakaungana vaviri kana vatatu muzita rangu, ndiripo pakati pavo.
Pauro aigara achitaura nezvekereke inopindirwa mumba. Haungakwanisi kuita kuti vanhu vazhinji vakwane mumba. Yakagadzirirwa mhuri yakasimba yakabatana.
Varoma 16:5 Ndikwazisireiwo kereke iri paimba yavo. Ndikwazisireiwo Epeneto, mudikanwa wangu, ndiye chibereko chekutanga muna Kristu pa Asia.
1 Vakorinte 1:11 Nokuti ndakavudzwa pamusoro penyu, hama dzangu, navari vokwaKroe, kuti kune gakava pakati penyu.
1 Vakorinte 16:19 Kereke dzepaAsia dzinokukwazisai. Akwira naPrisira vanokukwazisai zvikuru munaShe, pamwechete nekereke iri mumba mavo.
Kereke kuChina, nyika ine vanhu vakawandisa kupinda dzimwe dzese, yakakunda kuparadzwa nekuda kwekuti yaive nemasangano madiki-madiki emudzimba.
Kudonha kukuru kwehutungamiri hwevanhu kunoratidzwa apo Samueri anotsanangurira Israeri mubairo wesarudzo dzavo.
1 Samueri 8:18 Nezuva iroro muchachema kwazvo nekuda kwamambo wenyu wamunenge mazvitsaurira; asi JEHOVA haangakupindurii nezuva iroro.
Panguva yaunoda Mwari zvikuru, haangakutereri. Ichi ndicho chikamu chinogumbura kwazvo parudzi rwechinhu chinonzi munhu.
Ngationei kuti hutungamiri hwevanhu hwakarasika hwakatsanangurwa sei panyaya inotevera.
1 Samueri 8:19 Asi vanhu vakaramba kuteerera izwi ra Samueri, vakati, kwete, tinoda hedu mambo ungatibata.
20 Kuti isuwo tifanane nedzimwe ndudzi; mambo wedu atitonge, atitungamirire, nokurwa pahondo dzedu.
Tinofanira kuona kuti ruzhinji rwevanhu vari pasi pehutungamiri hwenhema, vanohuda huri sezvahuri. Vashoma vanozozviona vozosarudza kutungamirirwa neMweya Mutsvene.
Jeremia 5:31 Vaporofita vanoporofita nhema, navaprista vanobata ushe vachirairwa navo; asi vanhu vangu vanofarira izvozvo; zvino pakupedzisira muchaiteiko?
Vanhu vane hunyope hunotyisa, vanoda kuti vaitirwe chitendero chavo neumwe munhu. Chavanoda chete kuzovapo pabira racho, vonzwa vachikurudzirwa uye kusimudzirwa. Havafi vakakura pakuziva Mwari vanogara vachiedza kuzvienzanisa nevamwe vanhu pamweya nepamararamiro. Pauro anotiyambira pamusoro pehunhu hwakadai.
2 Vakorinte 10:12 Nokuti tinotya kuzvienzanisa nokuzvifananidza navamwe vanozvikudza; asi ivo havanenjere, zvavanozvienzanisa naivo vamene, nokuzifananidza naivo vamene.
Tsika yehutungamiri hwevanhu haina kungotanga nemutungamiri akasimba achiratidza vanhu zvekuita nekukurisa kereke. Asi yakatangira pasi-pasi ichisimuka. Vanhu vanoda munhu kuti avatungamirire. Zvinangwa zvinoita kuti vanhu vatange kuita izvi zvinowanzova zvakanaka uye zviri nechokwadi, asi nekuti zvakarasika kubva paShoko kubvira panheyo dzazvo, maitiro etsika iyi anobva an'oresa vatungamiri uye vanhu vemukereke. Kunyangwe zvematongerwo enyika zvinongofambawo nenzira imwe iyi. Vanhu vakanaka vakavimbika vanozofanirwa kuteverawo nzira iri kufambiswa zvinhu musangano ravakavamba kuitira kuti vasarasikirwe nezvinzvimbo zvavo uye kuti vafadze vanhu. Sangano iri harizongokuri nje kana kuti nekuti pari kufamba ruoko rwaMwari asi nekuti vanhu vanenge vasangana nezvinoenderana nezvavanofarira, pamaonero mararamiro uye zvinoita kuti vatambirwe zviri nani munharaunda. Kwekupedzisira sangano rimwechete iri rinenge rave kutongwa nekufambiswa negwara rezvido zveveruzhinji.
Musangano rimwechete iri mutungamiri akanaka anozoita uya anokwanisa kukasika kuona zvinofadza vanhu, zvavanoda uye zvinoita kuti vagoramba vachitevera hutugamiri hwake. Pakadai vanhu vanobva varumbidza munhu vokanganwa Mwari. Vanhu havazovaki hukama naMwari. Ruzivo rwavo rweBaibheri, mirairo yaMwari uye hupenyu hwavo pamweya hunova hwakaneta.
Sauro akava mambo, chinguvana akange ava kutevera zvido zvake nehurongwa hwake kwete hwaMwari. Akasimudzirwa kuiswa pachinzvimbo chemasimba nevanhu. Izvi zvakamuita kuti azvikudze uye ave mudadi.
1 Samueri 13:3 Jonatani akaparadza boka revarwi vavaFirisitia vaigara Geba; vafirisitia vakazvinzwa. Zvino Sauro akaridza hwamanda panyika yose, akati, VaHeburu ngavanzwe.
4 VaIsraeri vakanzwa kuti Sauro aparadza boka ravarwi vavaFirisitia, uye kuti vaIsraeri vavengwa navaFirisitia. Vanhu vose vakaunganidzwa kuti vaende Girigari naSauro.
Sauro akaisa kukudzwa kwaari pachinzvimbo chaJonatani aive akafanirwa nekukudzwa uku. Nekuti aive akagadzwa pachigaro chesimba nevanhu, aive akasungwa nevanhu kuti avafadze.
1 Samueri 13:11 Samueri akati, Waiteiko? Sauro akati, ndakaona kuti vanhu vopararira, vachindisiya, uye kuti imwi hamuna kusvika namazuva aive atarwa, uye kuti vaFrisitia vaive vaungana paMikimashi;
Kangani kawakaita chimwe chinhu nekuti munhu wese ari kuchiita kana kuti nekuti chinhu “chinotambirika” kana ukachiita? Kana kuti kangani kawakaita chinhu nekutya kuti vamwe vanozoita sei kana kuti vanozoti kudii? Nekuda kwesimba raive nevanhu vakanga vasarudza Sauro kuti ave mambo, akakundwa nekutya kuti vaizoita sei uye vaizoti kudii. Pirato akaita zvimwechetezvo zvikaita kuti Jesu arovererwe asina mhaka:
Mako 15:15 Zvino Pirato, nokuti akanga achida kufadza vanhu vazhinji, akavasunungurira Barabhasi, asi Jesu akamuroveresa, akamuisa kwavari kuti aroverwe pamuchinjiko.
Mwari anoramba tsika yakadai zvekusvikira pakuivenga. Pakereke yekutanga kuita kwehutungamiri hwevanhu uku kwairambwa asi mazuva ano nekukura kwaita masangano hazvicharambiki yatova dzidziso kumasangano.
Zvakazarurwa 2:6 As chinhu ichi unacho, kuti unovenga mabasa avaNikoraiti, andinovenga nenivo.
Zvakazarurwa 2:15 Nokudaro kuna vamwewo vanobatisisa saizvozvo dzidziso yavaNikoraiti, chinhu chandinovenga..
Mwari anozviona sekuita uye sedzidziso yavaNikoraiti. Zvakamirirwa navaNikoraiti, “kupamba chaunga chevanhu” nekumwe kududzira, kupamba vanhu vaMwari. Izvi zvinoitwa kupfurikidza nekubvisa hutungamiri hwechokwadi hunova hweMweya Mutsvene mohutsiva nehwenyama.
Pane muono unobva muBhaibheri wechokwadi pamusoro pekereke Petro anotsanangura sezvinotevera:
1 Petro 5: 1 Naizvozvo ndinoraira vakuru pakati penyu, ini mukuru pamwechete navo nechapupu chemadambudziko aKristu, nomugovani navo wokubwinya, ndichiti:
2 fudzai boka raMwari riri pakati penyu, musingazviiti nokurovererwa, asi nomoyo unoda nokuda kwaMwari, musingazviiti nokuda kwokukarira fuma yakaipa.
3 Musingazviiti nesimba nezvamakagoverwa asi muve vatungamiri veboka.
Izvi hazvinongedzi kuhutungamiri hwemunhu mumwechete mukereke, asi pakurarama semuenzaniso pakati pevamwe. Panotaurwa nezvevakuru (muhuzhiji) kwete munhu mumwechete. Vakuru vanobatsira pakuonesa nzira, kupa mazano nekudzidzisa maGwaro kuruzhinji rwevanhu mukereke vasati vanyatsokura. Hupenyu hwavo miyenzaniso kuvatendi vechidiki uye vanova miyenzaniso nekuti vakakwanisa kufamba pedyo naMwari kwenguva refu. Kupfurikidza zvipingaidzo uye zviitiko zvavakasangana nazvo vanokwanisa kuratidza kereke kuti Mwari anozadzisa sei zvaanovimbisa uye kuti anodei kwatiri sezvazvakanyorwa muBhaibheri.
Nehutungamiri hwemunhu mumwechete ruzivo rweBhaibheri rwunotsikirirwa rwotsiviwa nenhau dzinogadzirwa nemunhu. Zvakare tinoona muenzaniso panyaya yaSauro. Hondo yose yeIsiraeri yakaenda kunorwisa maFirisitia asi hapana aive nezvombo pakati pavo kunze kwaSauro naJonatani.
1 Samueri 13:22 Naizvozvo panguva yekurwa kwakanga kusine aive nemunondo, kana pfumo muruvoko rwomunhu mumwe wavanhu vakange vana Sauro naJonatani; asi Sauro naJonatani mwanakomana wake vakange vanazvo.
Bhaibheri rinofananidza Shoko raMwari nemunondo unocheka kwese. Apa tine mufananidzo wakanakisa wevanhu vaifanirwa kusangana nemuvengi vasingazivi Bhaibheri.
Vaefeso 6:13 Saka torai nhumbi dzose dzokurwa nadzo dzaMwari, kuti mugone kudzivisa pazuva rakaipa, nokuramba mumire mapedza zvose.
14 Naizvozvo mirai makasunga zviuno zvenyu nechokwadi, makapfeka chidzitiro chechipfuva chekururama.
15 Makasunga patsoka dzenyu kugadzirwa kweEvangeri yorugare;
16 Pamusoro paizvozvo makatora nhovo huru yekutenda, yamungagona kudzima nayo miseve yose yomoto wowakaipa.
17 Torai ngowani yoruponeso nomunondo woMweya, iro Shoko raMwari.
Pasina ruzivo rweBhaibheri vanhu vanopedzisira vave nekutenda kwenhema.
VaRoma 10:17 Naizvozvo kutenda kunouya nokunzwa, nokunzwa kunovuya neShoko raMwari.
Nyaya yaSauro inotiratidza kuti hutunganiri husiri ihwo hahurumbidzi Mwari nevaya vanozviti vatungamiri vemakereke kazhinji vanenge vakapoteredzwa nevabatsiri vakaipa.
1 Samueri 14:2 Sauro akanga agere pamugumo weGibiya, pasi pomutamba wakanga uri paMigironi; wakanga ana varume vanenge mazana matanhatu naye.
3 Ahija, mwanakomana waAhitubi, mukuru waIkabhodhi, mwanakomana waPinehasi, mwanakomana waEri, wakanga aive muprista waJehova paShiro, wakafuka efodhi. Vanhu vakanga vasingazivi kuti Jonatani waenda.
Ikabhodhi ndiyani , nekuda kwei akataurwa zita rake?
1 Samueri 4:21 Akamutumidza mwana zita rinonzi Ikabhodhi, achiti, Kukudzwa kwabviswa kuna Israeri; nokuti Areka yaMwari yakange yatorwa, uye nokuda kwababa vomurume wake, murume wake.
Vhesi iri ratiratidza kuti hutungamiri hwevanhu hunozvipoteredza nevanhu vasingarumbidzi Mwari. Kereke inotungamirirwa nemunhu kazhinji inoita hunhu hwekusarudzana kutarisa kuti nhingi anobva mumba maani mune mari yakawanda sei vanofamba nemota yakadii. Kakawanda sei kamakaona mufundisi wekereke kwozoita mwanakomana wake anozoshumira mukereke imwechete iyoyo? Ahiah airemekedzwa nekuda kwekuti aive wemhuri imwe naEri. Kunyange Eri aive muporofita wechokwadi hazvaiita kuti vana vake kana chero imwe hama yake inge yakarurama pamberi paMwari. Tinofanirwa kutarira munhu mumwe-nemumwe kupfurikidza nezvibereko zvemabasa ake. Zvisinei nechitendero ichi naSauro ari musoro (zvakafanana nezvimwe zvitendero zvose) vanhu vanoremekedza vanhu vari pamusoro, pachinzvimbo cheShoko raMwari. Chitendero chikuru chine hutungamiri hwevanhu hwakanyanya iRoman Catholic Church. Ndiyo kereke ine vateveri vakawandisa pasi rose nevanhu vangangosvike 1,2 biriyoni. Asi Mwari haafadzwi nayo uye zvakaipa zvayo zvakaporofitwa kuna Zvakazarurwa 18.
tinofanirwa kutungamirirwa neMweya Mutsvene kuti tigokunda kumanikidza kwaSatani. Mwari ane hurongwa nechinangwa saka vanotungamirirwa neMweya Mutsvene voga ndivo vachaziva zvekuita kana nguva yekurwa naSatani yasvika. Rangarirai Johane 16:13 – Achatitungamirira muzvokwadi otiratidza zvinhu zvichauya. Nenzira iyi takagadzirira asi vazhinji vachisara vasingazivi pazuva rekurwa. Vachasvikirwa vakavarairwa. Jonatani nevabatiri vake vakaenda vakanorwisa vaFirisitia. Vamwe vanhu vose vaIsiraeri vakanga vasingazivi kuti atoenda. Zvakadaro vamwe vaisatoziva kuti kwaive nemuvengi mukuru aida kurwiswa, uye zvikuru sei vaisaziva kuti vaizomukurira sei. Mweya unotaura kukereke yekupedzisira, kereke yatiri nhasi uno, unotsanangura chimiro chimwechete ichi:
Zvakazarurwa 3:17 Nokuti unoti, ndakafuma, ndakafumiswa, handishaiwi chinhu; usingazivi, kuti ndiwe unovurombo nenhamo, uri murombo nebofu usina chokufuka.
Sauro akaudzwa kuti aparadze vaAmarakaiti. Haana kuterera, akatora dzimwe mombe nehwai dzavo. Asi zvakadaro paaitaura naSauro aiita seasina chakaipa chaaive aita. Mumaziso ake aive akarurama asingambozivi kuti chivi chaaive aita ndechei.
1 Samueri 15:13 Samueri akasvika kuna Sauro, Sauro akati kwaari, Jehova ngaakuropafadze; ndaita sezvandakarairirwa naJEHOVA.
14 Samueri akati, Ko kuchema uku kwamakwai munzeve dzangu nokukuma kwemombe kwandinonzwa kunoti kudiniko?
Kumwe kukanganisa kunoitwa nehutungamiri hwevanhu ndekwekuti munhu mumwechete (mutungamiri) anokanganisa ofamba nenzira isiyo, ruzhinji rwese rwotevera mukukanganisa ikoko. Kana tiine hutugamiri hweMweya Mutsvene Mwari vane nzira zhinji dzekutidzora uye anokwanisa kushandisa muKristu mudikani wedu kutiratidza patarasika. Mubato rezvechitendero maKristu ari pazasi pazvinzvimbo haakwanisi kuudza vari pamusoro pavo kuti vakanganisa. Zvinoonekwa sekuti wave kupikisa mitemo yekereke kana kuti une godo kana kuti wave kuzviita mutsvene.
Mubato raMwari mune simba rimwechete rinova Shoko raMwari. Munhu wese anofanira kuzviwisira kwariri zvisinei ndiwe ani kana kuti wakakura kana kudupuka sei. Mwari anotarisa chete kuti uri kuita zvinotaura Shoko rake here kwete kuti chii chingakwaniswe kuitwa nemirairo yakagadzirwa nemunhu wenyama.
1 Samueri 15:22 Samueri akati, ko JEHOVA angafarire zvipiriso zvinopiswa nezvibairo, sezvaanofarira kuteerera izwi raJEHOVA here? Tarirai, kuteerera kunokunda zvibairo, nokunzwa kunokunda mafuta amakondohwe.
Masangano ane hutungamiri hwevanhu kazhinji anoita nguva dzekunamata dzinoyevedza dzakanaka pavanopira nziyo dzavo dzekurumbidza dzakaisvonaka. Vanhu vanonzwa kuti vazodzwa asi vachishaiwa kutendeka. Vachazosangana nedambudziko rimwechete sera Sauro.
1 Samueri 16:14 Zvino Mweya waJEHOVA wakanga wabva kuna Sauro, mweya wakaipa wakanga watumwa naJEHVA, ukamuvhundusa.
Kana tikaramba tichikanganisa Mwari anopedzisira atisiya kuti titende kune zvekunyepa.
2 Vatesaronika 2:10 Nokunyengera kwose kwokusarurama kuna vanoparara; nokuti havana kugamuchira rudo rwezvokwadi, kuti vaponeswe.
11 Saka Mwari unovatumira simba rokukanganisa, kuti vatende nhema.
Bhaibheri rinotiyambira nezvenguva yematambudziko ichauya apo iyoyi kereke yemirairo netsika dzakagadzirwa nevanhu ichashungurudza vateveri vaJesu Kristu vari pachokwadi.
1 Samueri 18:11 Sauro akaposha fumo, nokuti wakati, ndichabaira Davidi pamadziro. Davidi akanzvenga kaviri pamberi pake.
12 Sauro akatya Davidi, nokuti JEHOVA akanga abva kuna Sauro.
Uri chikamu chesangano rekereke kana chaunga chinotevera dzidziso yemudzidzisi mukuru kana muporofita here? Kunyangwe dai mudzidzisi uyu aive nechokwadi kana kuti ainatsa, nzira dzakaitwa nevanhu pakuvaka chaunga ichi kana sangano iroro ndedzenhema. Edza hutungamiri hwekereke yauri uchishandisa zvinobva muBhaibheri, uve nechokwadi kuti Mweya Mutsvene ndiwo unokutungamirira nekuti wakavimbisa kuti uchakuratidza chokwadi.
Kana ukazviwana uri musangano rakadai, chiripo chinhu chimwechete chaunofanira kuita:
Zvakazarurwa 18:4 Zvino ndakanzwa rimwe izwi raibva kudenga, richiti: Budai mariri vanhu vangu, kuti murege kuwadzana naro pazvivi zvaro, mugorega kupiwa matamudziko aro.